Ukuphupha ngesitishi sebhasi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngokuqinisekileyo sonke sidlulile kwindawo yokumisa ibhasi okanye silinde enye. Indawo yokumisa yindawo ephawulwe ngokukodwa esecaleni kwendlela okanye kwisikhululo sikaloliwe, apho izithuthi zikawonke-wonke ziyema ngexesha elimiselweyo lokukhwelisa abakhweli abalindileyo kwaye ubathumele kwindawo yokuma eyongezelelweyo.
Ukuma eJamani kuphawulwe ngophawu lwendlela ethile ekulula ukuba ibonwe ngumntu wonke. U "H" oluhlaza okwimvelaphi etyheli ubonakalisa wonke umntu ukuba yibhasi, uloliwe weedolophu okanye isikhululo sikaloliwe ohamba ngaphantsi komhlaba.
Kodwa amanye amanqaku anokubizwa ngokuba yi-stop. Umzekelo, iindawo zokupaka i-carpool, apho abahambi banokufika khona ngexesha elichaziweyo kwaye basebenzise inani elincinci leemoto eziyimfuneko ukufikelela kwindawo ethile ekwabelwana ngayo. Oku akukhuseli iimoto zakho kuphela kunye nesipaji sakho, kodwa kukwakhusela imeko-bume yethu.
Makhe sijonge ngezantsi ukuze sibone ukuba amaphupha amisa ntoni ngebhasi:
1 Uphawu lwephupha «misa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «yeka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibhasi yokumisa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «misa» - ukutolikwa ngokubanzi
Xa ucinga ngophawu lwephupha "indawo yokumisa ibhasi", uhlala uyidibanisa nombono wokulinda okungathandekiyo kwaye ukungabi namonde. Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona unxibelelwano phakathi kwephupha lokumisa ibhasi kunye nokuvuka kobomi ngendlela efanayo.
Nabani na obonwa elinde ixesha elide kwindawo yokumisa iibhasi, kwisikhululo sebhasi okanye kwisikhululo sezithuthi kwisiganeko sephupha ngaphandle kokufika ekugqibeleni kwezothutho ekudala zilindelwe, ezinokubonwa nakubomi bokwenyani. ubunzima ude ufikelele kwinjongo yakho. Kodwa nokuba indlela inobunzima kwaye iyaphazamisa, ekugqibeleni, oko akuthethi ukusilela kwesicwangciso. Endaweni yokuphupha kufuneka ujongane kakhulu neenjongo zakhe ezibekiweyo kwaye azithathele isigqibo sokuba kufanelekile na ngomzamo kunye nentuthumbo kuye.
Kulapho ungadibanisa khona enye inkcazo yophando lwamaphupha, ethi iphupha liyayeka njengophawu lwephupha. ukuphumla kuyafuneka kufuneka iqondwe. Ngaphambi kokuba lo mntu kuthethwa ngaye athathe amanyathelo, kufuneka kuqala bathathe ixesha kunye nokuzola bacinge malunga nomcimbi kwaye emva koko bathathe isigqibo.
Ukuba uva emaphupheni akho imeko yokubanjwa phakathi kweendawo ezimbini zokuma, umzekelo kwindlela engaphantsi, oku kubonisa imeko yokuziphatha ethe-ethe ejongene nezinto ezininzi. Umonde y Ukuqonda ingasombulula.
Ukuba uphupha ukuphoswa kukumisa kwaye uqhubeke nje, nokuba uvukile ebomini unemvakalelo yokuba uphoswe lithuba. Umphuphi kufuneka acinge ukuba ingaba bubulumko kwaye kunokwenzeka ukuthatha enye indlela yobomi emva koko.
Uphawu lwephupha «yeka» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "yeka" lubonisa umnqweno wephupha inkxaso. Ukuba okwangoku ukwimeko enzima kakhulu yobomi kuye, iphupha lokuma apha libonisa ngokucacileyo ithemba lakhe. Uncedo evela ngaphandle.
Kanye njengokuba umntu elinde esitophini sebhasi ukuba sithathwe kunye nawe, eli phupha likwanomnqweno wokungabi wedwa, kodwa ukuba uthathwe kunye nawe okanye urhuqelwe ebomini, kuba ngalo mzuzu uzibona enyathela indawo kuphela. ayiqhubeli phambili.
Kuba ukumisa apha kubonisa inqaku ekuvukeni kobomi apho kungasebenzi nto, oko kukuthi, umntu ophuphayo kufuneka asebenzise ngobunono umxholo wephupha ukucinga ngobomi abebuphile ukuza kuthi ga ngoku. Ukuma kunokubonisa ukuba uyinxalenye yobomi. elinye icala Kuya kufuneka unike, kuba akushiywanga lixesha lokushiya le nto sele uyiphile kwaye uzihlaziya.
Uphawu lwephupha «ibhasi yokumisa» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolika kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "ukuyeka" kuthetha ukucinga ngaphakathi kwaye inamandla okutshintsha.